အကောင်းဆုံး နွေရာသီ Face Cream ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး နွေရာသီ Face Cream ကိုရှာဖွေရန်။
နွေရာသီ Face Cream
ကျနော်တို့၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူများမှာ နွေရာသီ Face Cream။ အဆင်ပြေသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြည်တွင်းစျေးကွက်လျှောက်လုံးကောင်းစွာ accessSelling နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှဖောက်သည်များချီးမွမ်းခြင်းအနိုင်ရပါပြီလည်းနွေးနွေးထွေးထွေးအတွက် client များကကြိုဆို Taiwan။ ကျနော်တို့ဘုံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပို client များနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ကပ်ခဲ့ရာမှအကျိုးခံစားရဖို့ဒီနေ့။
။ ရန် hesitance မ ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ယခု။
ပိုမိုမြင့်မားသော moisturizing နှင့်ရုတ်သိမ်း
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ:hyaluronic အက်ဆစ်,ကော်လာဂျင်,ganoderma,သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးမြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်ရေ,jojoba ရေနံ,rosehip ရေနံ
ဘေးကင်းရေး:မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုနှင့် steroids အခမဲ့ဖြစ်သည်
အသုံးပြုနည်း:နံနက်ခင်းနှင့်ည ဦး ယံ၌အရေပြားကိုသန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်,ပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုသောအရေပြားပေါ်တွင်အနည်းငယ်နှစ်ပါ,ညင်ညင်သာသာအကြောင်းကိုဆယ်စက္ကန့်ပွတ်ပေးပါ,အနည်းငယ်နွေးထွေးမှုရှိရလိမ့်မည်,ထို့နောက်သင့်လျော်သောငွေပမာဏကိုလျှောက်ထားပါ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/summer-face-cream.html
အကောင်းဆုံး နွေရာသီ Face Cream ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် နွေရာသီ Face Cream ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ နွေရာသီ Face Cream ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
VSK တဆေးစင်ကြယ်သောမုန့် ပုလင်းတစ်လုံးသည်စုပ်ယူရန်လွယ်ကူသည်,စေးကပ်ခြင်းမရှိ,မလေးဘူး,အလွယ်တကူပျော့ပျောင်းနူးညံ့သောအသားအရေရှိပါတယ်,ထိရောက်စွာအရေးအကြောင်းတွေချောမွေ့,အသားအရေကို firming,နှင့်အရေပြားအိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်.Maintenance အာရုံစူးစိုက်အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းနှင့်ဆီပြန်ဖြည့်ခြင်းတို့သည်လှပသောအသားအရေရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်;အရေပြား elasticity ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအိပ်မက်မဟုတ်ပါဘူး. Maintenance ရည်ရွယ်ချက်အသားအရေကိုစိုပြေစေခြင်း,အရေပြားအိုမင်းခြင်း,အသားအရေနူးညံ့သောထိပေးပါ,ချောချောမွေ့မွေ့လိုင်းများ,အသားအရေကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေပါ,နှင့်အသားအရေကိုအဖြူနှင့်တောက်ပစေ.ကို Maintenance အကြံပေးချက်များ အထွေထွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု:မြေပဲ ၂ မှ ၃ ခုကိုယူပြီးမျက်နှာနှင့်လည်ပင်းပေါ်တွင်အညီအမျှသုံးပါ,ထို့နောက်ညင်ညင်သာသာလိမ်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်နှိပ်နယ်ပြီးစုပ်ယူပါ. ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အမျိုးအစား:ဆောင်း ဦး နှင့်ဆောင်းရာသီတွင်အိပ်ရာမဝင်မီဂရုစိုက်ပါ;ထို့နောက်မြေပဲစေ့ ၂ မှ ၃ ခုကိုယူပြီးမျက်နှာနှင့်လည်ပင်းပေါ်တွင်အညီအမျှလျှောက်ထားပါ.ထို့နောက်တစ် ဦး လိမ်လက်ချောင်းထိပ်၌ညင်ညင်သာသာနှိပ်ပြီးစုပ်ယူ. စွမ်းရည်:60ml/ပုလင်းမူလ:ထိုင်ဝမ်
Moniface ဆောင်းရာသီမျက်စိ/မျက်နှာပြုပြင်ရေးမျက်နှာပြင် ဆန့်ကျင်-အရေးအကြောင်းအဆောင်,အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးသင့်လျော်သည်,မျက်စိနှင့်မျက်နှာအဘို့အသင့်လျော်မူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သီးသန့်ပုံသေနည်းအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ:hyaluronic အက်ဆစ်,ကော်လာဂျင်,ganoderma,သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးမြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်ရေ,jojoba ရေနံ,rosehip ရေနံထိရောက်မှု:Whitening အသားအရေ.မှောင်ခြင်းကိုပေါ့စေနိုင်သည်,ချောမွေ့ချောမွေ့,အရေပြားလိုင်းများကိုဆန့်,အရေပြားဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်,နှင့်အသားအရေတောက်ပစေသည်ဘေးကင်းရေး:မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုနှင့် steroids အခမဲ့ဖြစ်သည်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖောင့်အရွယ်အစား:05000256တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမူပိုင်ခွင့်တီထွင်မှုအမှတ်.I660119 တရုတ်မူပိုင်ခွင့်အမှတ်.M556284စွမ်းရည်:30mlသက်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထု:အရေပြားအမျိုးအစားအားလုံးကိုသက်ဆိုင်ပါသည်သက်တမ်း:အခန်းအပူချိန်မှာဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲ 15 လ
MONIFACE အစက်အပြောက် SOFTENING CREAM ပိုမိုမြင့်မားသောဓာတ်လှေကား/အရေးအကြောင်းတွေ desalinationအသားအရေချောမွေ့သည်,လန်းဆန်းစေသောအစိုဓာတ်,နေ့စဉ်အခြေခံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သီးသန့်ပုံသေနည်းအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ:hyaluronic အက်ဆစ်,ကော်လာဂျင်,ganoderma,အမိုင်နိုအက်ဆစ်,သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးမြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်ရေ,jojoba ရေနံ,rosehip ရေနံထိရောက်မှု:နူးညံ့ပြီးချောမွေ့သော cuticles/အရေပြားခြောက်သွေ့စေရန်/ရေကိုထိန်းသိမ်းထားပါ/အစိုဓာတ်/အသားအရေကိုစိုစွတ်စေ/အရေပြားဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်,အရေပြားတောက်ပစေဘေးကင်းရေး:မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုနှင့် steroids အခမဲ့ဖြစ်သည်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖောင့်အရွယ်အစား:05000256တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမူပိုင်ခွင့်တီထွင်မှုအမှတ်.I660119 တရုတ်မူပိုင်ခွင့်အမှတ်.M556284စွမ်းရည်:30mlသိုလှောင်နည်း:ကျေးဇူးပြု၍ အေးသောနေရာတွင်ထားပါ,တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ကိုရှောင်ပါမှတ်ချက်:မင်းကမသက်သာဘူးလို့ခံစားရရင်,ချက်ချင်းပဲအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ